Bit By Bit - Ikamva - 7.2.2 ukuqokelelwa kwedatha nxaxheba-lugxile
Ukuqokelelwa kweenkcukacha ezijolise elidlulileyo, ezo umphandi-lugxile, Asiy ukusebenza kakuhle kweminyaka yesuntswana. Kwixesha elizayo, siza kuthatha indlela nxaxheba-iziqu.
Ukuba ufuna ukuqokelela idatha kwixesha ledijithali, kufuneka uqaphele ukuba ukhuphisana nexesha labantu kunye neengqalelo. Ixesha kunye neengqalelo kubathathi-nxaxheba bakho bayabaluleke kakhulu kuwe; yinto ebalulekileyo yocwaningo lwakho. Uninzi lwezinzululwazi zentlalo zijwayele ukuyila uphando malunga nabantu abathintekayo, njengabafundi bezithuba ze-campus labs. Kulezi zicwangciso, iimfuno zomphandi zilawula, kwaye ukuzonwabisa kwabathathi-nxaxheba akuyona nto ephambili. Kuphando lwe-digital-age, le ndlela ayizinzileyo. Abathathi-nxaxheba bavame ukuhlala kude nabaphandi, kwaye ukusebenzisana phakathi kwezi zibini kudlalwa ngonxibelelwano ngekhompyutha. Esi silungiselelo kuthetha ukuba abaphandi banomncinci wokubamba iqela kwinxaxheba kubafundi kwaye ngoko kufuneka bavelise amava amanxaxheba athabisayo. Kungenxa yoko kwisahluko ngasinye esithintela ukusebenzisana nabathathi-nxaxheba, sibone imizekelo yeengcaphephe ezithatha inxaxheba ekujoliswe kuyo ekuqokelelwa kwedatha.
Ngokomzekelo, kwisahluko sesi-3, sabona indlela uSharad Goel, i-Winter Mason kunye no-Duncan Watts (2010) adala umdlalo obizwa ngokuba ngu-Friendsense okwakubonwe ngobuqili kwi-survey ye-attitude. KwiSahluko 4, sibone indlela onokudala idatha ebiza ngayo iindleko ngokuyila iimvavanyo abantu abafuna ukuzenza kuzo, njengomculo (Salganik, Dodds, and Watts 2006) kunye nePeter Dodds kunye ne-Duncan Watts (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Ekugqibeleni, kwisahluko sesi-5, sibone indlela uKevin Schawinski, uChris Lintott kunye neqela leGalaxy Zoo lenza usebenziswano oluninzi olukhuthaza abantu abangaphezu kwe-100,000 ukuba bathathe inxaxheba kwi-astronomical (kwimiba yomibini yegama) umsebenzi wokubhala (Lintott et al. 2011) . Kwimeko nganye yeziganeko, abaphandi bajolise ekudaleni amava amnandi kubathathi-nxaxheba, kwaye kwimeko nganye, le ndlela ibandakanyeke inika iindidi ezintsha zophando.
Ndilindele ukuba kwikamva, abaphandi baya kuqhubeka nokuphuhlisa iindlela zokuqokelela idatha ezizama ukudala amava omsebenzisi. Khumbula ukuba kwixesha ledijithali, abathathi-nxaxheba bakho banqakraza ngokukodwa kwividiyo yejaji ye-skateboarding.